लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, ७५ करोड खर्च हुँदा १४ करोड राजस्व सङ्कलन | गृहपृष्ठ
Home समाचार लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, ७५ करोड खर्च हुँदा १४ करोड राजस्व सङ्कलन
on: २५ आश्विन २०७५, बिहीबार १९:०८ समाचार
लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, ७५ करोड खर्च हुँदा १४ करोड राजस्व सङ्कलन
असोज २५, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गएको एक वर्षमा आयोगको कार्यसम्पादनमा रू. ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा रू. १४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था छ । वि.सं. २०१६ मा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले गत आर्थिक वर्ष कुल ५ हजार ९ सय ७० पदका लागि १ हजार २ सय ४ र समावेशी प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८ सय ७ ओटा विज्ञापन खुलाइएको जानकारी दिए । त्यसमा कुल ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ दरखास्त परेको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा यो छ गुणाले वृद्धि हो ।
अघिल्लो आवभन्दा गएको वर्ष दरखास्तमा ३३ प्रतिशतले कमी आएको आयोगले जानकारी गराएको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त खरीदार पदमा १ लाख ४६ हजार ४ सय ७६ परेको थियो जसमा प्रदेश नम्बर २ बाट कुल दरखास्तको २५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी २१–२५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशतले दरखास्त दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन मध्ये १ सय १ ओटामा कुनै पनि दरखास्त परेन ।
दरखास्त परेकामध्येबाट कुल ७ हजार ७ सय १८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । जसमा २ हजार ४ सय ६५ (३२ प्रतिशत) महिला छन् । प्रदेश नम्बर २ बाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायीका लागि सिफारिस भएका छन् । समावेशीतर्फ ३ हजार २ सय ४४ जना सिफारिस भएका थिए । गएको आठ वर्षको अवधिमा ४१ हजार ६८ स्थायी नियुक्तिमा सिफारिस गरिएको अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिए । सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फ ३ लाख ६९ हजार ८ सय ५७ मध्ये लिखित परीक्षामा १ लाख ५९ हजार ४ सय २६ सहभागी भएका थिए ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले अहिले आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा परामर्श नै नभएकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले यथास्थितिबाट माथि उठेर समयानुकूल आफूलाई रुपान्तरण गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा विज्ञबाट दोहोरो परीक्षण विधि अपनाएको बताएको छ । यस्तै विद्युतीय भुक्तानी विधि अपनाइएको, अनलाइन प्रणालीमार्फत पदपूर्तिका चरणलाई स्वचालित बनाउनेतर्फ अग्रसर रहेको, एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको र क्षमतामा आधारित छनोट प्रणाली लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । रासस
आर्थिक वर्ष वितेको ३ महिना भित्रै वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु कार्यक्षमताको परिणाम हो । यसमा कर्मचारी एवम पदाधिकारीलाइ तलवको ५०-७५ प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था भए राम्रो । अरु कार्यालयका कर्मचारीले यस्तो सुविधा लिएका छन् ।
फागुनभित्रै लेखापरीक्षण सक्न सरकारी निकायहरू दबाबमा